10 Sano jir, Tarjubaan Ka Noqotay Mid Ka Mid ah Baarlamada Aduunka Ugu Caansan..
Sunday August 28, 2011 - 20:00:51 in Sheekooyin by Super Admin
Alexia Sloane waxay lumisay araga indhaheeda iyadoo 2 sano jir ah ka dib markii uu ku dhacay cudur xaga maskaxda ah kaasi oo sababay inay waydo guud ahaan araga indhaha oo aysan waxba arki karin, laakiin taasi ma aysan lumin mustaqbalkeeda oo gabadha
Alexia Sloane waxay lumisay araga indhaheeda iyadoo 2 sano jir ah ka dib markii uu ku dhacay cudur xaga maskaxda ah kaasi oo sababay inay waydo guud ahaan araga indhaha oo aysan waxba arki karin, laakiin taasi ma aysan lumin mustaqbalkeeda oo gabadhan hada waxay soo jiidatey indhaha caalamka ka dib markii ay turjubaan ka noqotey Baarlamanka midowga Yurub. Inkastoo Alexia Sloane ay shaqo aad u heer sareysa oo dakhli fiican ka soo galo ay haysato hadana wali waxay sii wadataa waxbarashadeeda waxaana ay ka kaalinta koowaad ka heshay waxbarashada heerka dugsiga sare ee wadanka Ingiriiska ee loo yaqaan GCSEs iyadoo si aad u sareya u taaaan luuqadaha Faransiiska, Spanish-ka iyo tan ay u dhalatey ee English-ka waxaana ay haatan barataa luuqadaha Carabiga & Ruushka.
Todobaadkii la soo dhaafay ayey tagtey magaalada Brussels ee caasimada wadanka Belgium, halkaasi oo ay ka bilowday turjubaan ay ugu shaqeynayso midowga Yurub, ka dib markii ay ku guuleystey abaal marin uu bixiyey midowga Yurub oo ku aadan ilmihii ugu aqoonta fiicneyd taasi oo lagu gudoonsiiyey xaflad bulsho.
“Waan jeclahay barashada luuqadaha, luuqadaha Spanish-ka iyo Fransiiska waxay ii ahaayeen fududeyd inaan barto, laakiin waxaan ka dareemay adeyg ama culeys Luuqadaha Shiinaha waayo inaad heshaa ton-ka ama codka luuqada sida ugu wanaagsan” ayey tiri Alexia oo ka sheekaynaysay barashadeeda luuqadaha.
Alex waxay sheegtey in hadii aanay jirin luuqada la barto inay adkaan laheyd in aduunka wax laga ogaado, taasi aheyd sababaha ay u dooratey barashada luuqadaha.
“Markii aan jirey 6 sano ayaan hooyadey u sheegay inaan doonayo inaan barto luuqad kale, markaasi ayay i tiri waa hagaag, ka waran luuqada Shiinaha ka dibna sidaasi ayaan ku bilaabay waxaana xiligaasi ii qorsheysneyd inaan barto oo ku xijiyo luuqadaha Carabiga & Ruushka. Ayay tiri Alexia Sloane.
Alexia oo 10 sano jir ah waxay noqotey qofkii ugu da’ada yaraa ee turjubaan ka noqda Baarlamanka Midowga Yurub ee ku yaal magaalada Brussels ee caasimada wadanka Belgium.
Alexia Sloane waxay ka hadashay dareenka indho la’aanta ama aragti la’aanta waxaana ay tiri “waxaan is leeyahay dhagehayga maqalkoodu in uu aad u sareeyo taasi oo ka imaanaya aragti la’aanta indhaheyga, waxaan wax ka maqli karaa dadku xitaa marka ay jikada wax furayaan anigoo jooga dabaqa sare, xitaa waxaan maqlaa neefashada dadka anigoo meel ka durugsan jooga qofkaasi”.
“Magaalada Brussels dhab ahaantii aad ayaan uga helay, waxaan ku shaqeeyaa Turjubaan ahaan waxaan Spanish-ka u badalaa English, sidoo kale Faransiiska ayaan u tujumaa English” ayay tiri Alexia.
Alexia waxay sii hadashay waxaana ay ka sheekaysay dareenka shaqadeeda iyo waxyaabaha ay la kulanto waxaana ay tiri “ Way jiraan weero aad u adag, laakiin waan maamulaa, waxaana go’aansadey inaan noqdo Turjubaan mana jiraan wax iga horistaagi kara”.
Alexia waxay isticmaashaa cajalado kala duwan & wadahadalo wada sheekaysi oo ay la leedahay barayaasheeda si ay u fahamto lahjada luuqadaha.
Gabadhan waxay ka baxdey Hills Road Sixth Form College ee ku taal magaalada Cambridge ee wadanka Ingiriiska, waxaana gabadhan ay la nooshahay waalidkeed hooyadeed oo lagu magacaabo Isabelle oo 43 jir ah iyo Aabaheed Richard oo 61 sano jir ah kuwaasi oo macalimiin ka ah Cambridge iyo walaasheed Melissa oo afar sano jir ah.
Xafiiska Warqabadka Codka Muqdisho